Amnesty oo ka digtay in laga qaado Soomaaliya xayiraada dhinaca hubka e saaran
Home Somali News Amnesty oo ka digtay in laga qaado Soomaaliya xayiraada dhinaca hubka e...
Heyadda Caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa uga digtay galaha amaanka ee Qaramada Midoobay in uu qaado cunaqabataynta dhinaca hubka ee saaran dalka soomaaliya
Hey’adda ayaa arrintaani ka hadashay Isniintii shaley kaddib markii la sheegay in golaha ammaanka QM uu dood ka yeesho arrintaas maalinta beeri oo Arbaca ah.
“ In Cunaqabataynta dhinaca hubka laga qaado dalka Soomaaliya waa go’aan aan suura gal ahayn xilliga “ sidaas waxaa tiri cilmi bare ka tirsan Amnesty International Gemma Davies.
Waxa ay sheegtay in Khatar wayn ay ku tahay dadka rayidkaa ee Soomaaliya cuna qabataynta hubka in la qaado aydoo aysan jirin cid qaadaysa masuuliyada ammaanka iyo badbaadaada dadka rayidka islma markaana ay ka sii dari karto xaaladda bini’aadanimo ee dalka Soomaaliya.
Warkaan ka soo yeeray hay’adda Amnesty International ayaa waxa ku soo aadayaa xilli la filayo dhawaan in golaha ammaanka uu yeesho fadhi uu kaga hadlayo in Soomaaliya cunaqabataynta hubka laga qaado muddo sannad ah.
Si kastaba ha ahaatee arrintaani ayaa ka dambaysay codsi dawladda Soomaliya u jeedisay Qaramada Midoobay.
Xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ayaa ku kala fikir duwan go’aanka dalka Soomaaliya looga qaadayo cunaqabataynta hubka ee saarnayad tan iyo sanadkii 1992.
Dawladda Maraykanka ayaa taageersan in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta halka dalalka ingiriiska iyo faransiiska ay arrintaani walwal ka muujinayaan.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxaa la filayaa fadhiga maalinmada khaamisya ay ku yaalanayaan xarunta QM ee New Yorka in kaga hadlaan xaalada dalka Soomaaliya, gaar ahaan golaha waxa uu si gaar ah uga hadli doonaa waxa laga yeelaya Mandheetka ciidamada AMISOM ku joogaan dalka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow.